कोरोना महामारीको सजाय कहिलेसम्म ?
कोरोना भाइरसको आतंकबाट विश्व त्रस्त छ । विश्वका मै हुँ भन्ने राष्ट्रहरू पनि कोरोना महामारीबाट निरिह बनेका छन् । सबै जात, धर्म र वर्ग महामारीबाट समान हिसाबले पीडित छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि अहिले विश्वका अधिकांश देशमा लकडाउन र निषेधाज्ञा लागु भईरहेको छ । जसको कारण सेवाकार्यमा जुटेका सरकार सम्बद्ध केहि प्रशासक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय सम्बद्ध व्यक्ति विशेष र स्वयंसेवी बाहेक अधिकांश समुदाय घरमै सीमित छन् । सबैको उद्देश्य अहिले कोरोना भाइरसबाट कसरी बँच्ने÷बचाउने, फैलिन नदिने र कोरोनालाई कसरी निष्प्रभावी बनाउने दिशामा केन्द्रित छ । निकै सम्पन्न र शक्तिशाली भनिएका अमेरिका र युरोपको अवस्था अहिले उनकै कहालीलाग्दो छ । सन्त्रास व्याप्त छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा अनेक खालका समाचारहरु आइरहन्छन् । नकारात्मक र सकारात्मक दुवैखाले समाचारका बीचमा दुःखका खबरहरु धेरै छन् । मन एकतमासले दुःखेको अनुभूति भैरहन्छ । यही अनुभूतिका बीच उत्पन्न केही विषयहरुलाई यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । साँझपख अचानक आकाश रिसाएर गुमुक्क पर्दै पर्लक्क, पुर्लुक आँखा फर्काउँदै जोडले गाली गर्दै, कराउन सुरु गर्छ । केहि दिन अगाडि नै चट्यान लागेर केही ब्यक्तिको मृत्युको समाचार सुनेको थिएँ । हिजो पनि खुब चड्कन बजारे जस्तो आवाज आयो । कता–कता क–कसलाई चड्कायो, चड्काएन थाहा भएन तर, मलाई पनि चड्काउने पो हो कि भनेर खुब डर लाग्यो । केही हदसम्म मनलाई सान्त्वना दिन लुरुक्क कोठा तिर पसेँ । आखिर जिन्दगीमा मृत्युभन्दा डरलाग्दो चिज के नै रहेछ र ? केही छिनमै आकाश कराउँदै, रुँदै गर्न थाल्यो । एकान्त कोठामा मन चसक्क भयो । मनमा अनेकौं अनुत्तरित प्रश्नहरुको आगमन भयो ।
के हुँदैछ मानव जगतमा ? कहिलेसम्म रहला यो अवस्था ? कहिले प्राकृतिक विपत्ती त कहिले महामारी अझै कतिञ्जेल कति र को–को मर्ने हुन् ? लाखौं हारिसके र गुमाइसक्यौँ, कैयौं जुध्दै छन् कोरोना नामक शत्रुसँग । कतिले हराए पनि कोरोनालाई र बाँकी बन्द कोठाभित्र कैदिको जस्तो जीवन बिताउन बाध्य छौँ । अपराध गरेर जेल बसेको कैदीलाई बरु रिहाई हुने निश्चित समय तोकिएको हुन्छ तर, हाम्रो सजाय अनिश्चित छ । मात्र महशुस गरेको छु के नै रहेछ र आखिर यो जिन्दगी ? अझै किन गर्छन् मान्छेहरु तेरो, मेरो भन्दै खुट्टा तानातान ? अनि कहाँ के गर्दै होलान् कस्तो अवस्थामा होलान् अंग भङ्ग भएर चोक चोकमा थाली थापेर अरुले दिएको २÷४ पैसाले पेट भर्नेहरु ? मन छट्पटिएको छ, तड्पिएको छ तर गर्न शब्द लेख्नु बाहेक सक्ने अवस्था केहि छैन् । जति समय बित्यो उति आतंकित बनेको छ परिस्थिति ।
अझै कहिलेसम्म रहला यो अवस्था ? महिनौँ हुँदै, ६ महिना, वर्ष दिनसम्म रÞह्यो भने कति पुग्ला मृत्युदर ? कति पुग्लान संक्रमित संख्या ? खाने के, गर्नेे के, यो भयावह परिस्थितिसँग जुध्ने कसरी ? सम्झँदा पनि भकानिन्छ मन, अतालिन्छ मन । जिन्दगी फुलाउने, परिवारलाई खुशी दिने, आमालाई हसाँउने, कैयौं सपनाहरुका बाढी बोकी जिन्दगीलाई पैसासँग धितो राखी विभिन्न देशहरुमा संघर्ष गर्न लाखौं सन्तानहरु पुगेका छन् । तर आजको यो अवस्थाले परिवार कता, आफु कता र सपना कता बनाएको छ । दुःखमा परिवार र आमाको काखभन्दा उत्तम स्थान अरु कहाँ नै हुन्छ र ? मन कस्लाई हुँदैन परिवारको साथमा रहन । दुनियाँ ठप्प छ, न घर जाने आधार छ, न समयको निश्चित छ ? मन गाँठो पार्दै बन्द कोठाभित्र आफुलाई सम्हाल्दै परिवारलाई सम्झाउँदै आत्मबल बलियो बनाउनु बाहेक अरु उपाय के नै छ र । पीडा सबैलाई छ ।
अझ घरजग्गा, गरगहना धितो राखेर सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै भर्खर, भर्खर प्रदेशिने विद्यार्थी र अन्य व्यक्तित्वहरुको मनस्थितिमा झन् कति असर परेको होला ? ऋणको भारीले भन्दा अझ बढी पीडाको भारीले थिचेको छ होला । के–कसरी गुज्रिएको छ होला उनीहरुको दैनिकी ? यति महिना यो काम गरेर यसरी व्यवस्थापन गर्छु भन्ने योजना अवश्य हामी सबैको हुन्छ । कसले साेंचेको थियो र यस्तो भयावह परिस्थिति र जाइलाग्ला भनेर ? कतिपय नेपालीको कोरोनाको कारणले प्रदेशमै मृत्यु भएको खबर सुनिएको छ । कमाउन गएको छोरा, श्रीमान्, बुवा रोगको शिकार बनि मुर्दा बनेको खबरले परिवारको हालत के होला ? कति चोट लागेको होला मन मस्तिष्कमा ? के गर्नु परेपछि जे पनि भोग्नैपर्ने यो नियतिको खेल यस्तै रहेछ ।
विदेशमा मात्र होइन आफ्नै देशमा पनि विद्यार्थीहरुले बोक्नुपरेको छ कैयौं समस्याका भारीहरु । बन्द कोठाभित्र घरबाट अडकलेर लगेको खर्च, मनभित्र रोगको त्रास यो अवस्थाको सामना, घर जाने समय नमिल्नु गाडी नपाएर अलपत्रमा परेका कैयौं छन् । खुब साेंच्छु के होला भविष्य, पूरा होला कि नहोला सपनाहरु ? यो समयले के बनाउला ? फेरि सम्झाउँछु आफैलाई पहिला हामी सबै संयमित भएर बाँच्नुपर्छ । जिन्दगी रह्यो भने नै समस्याहरुसँग त डटेर जुध्न सक्छौं । सम्पन्न हुनेहरुले त महिनौलाई पुग्ने खानाको जोहो पहिले नै गरिसकेका हुन्छन् तर, दिउँसो काम गरेर साँझ, बिहान छाक टार्ने मजदुरहरुको अवस्था कस्तो होला ? यो अवस्था, समयले ल्याएको परिस्थिति कहिले भूकम्पको कारण भागा–भाग गर्नुपर्ने, कहिले रोगसँग बच्न घरभित्र लुक्नुपर्ने, संवेदनशिल बनेर साेंच्न थाल्यो भने फनफनी रिंगटा लाग्छ ।
लाग्दा रुघाखोकी, आउँदा ज्वरो, मसम्म आयो कि कतै कोरोना भन्दै मन झसङ्ग हुन्छ । सबै ठाउँमा यस्तै छ त भन्दिन कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अझै पनि अस्पताल जाँदा परबाट छोइन्छ कि जसरी औषधी दिएको देखिन्छ । फेरि प्रश्न गर्न मन लाग्छ आफैसँग, साँच्चै यस अवधीमा अन्य बिरामीहरुको उपचार कसरी भैरहेको होला ? पहिला जस्तो सहज रुपमा भएको छ कि छैन होला ? सबै प्रकारका बिरामीहरुले स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन् कि छैनन् होला ? कतै अकालमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने त होइन ? कर्णाली जस्ता विभिन्न विकट ठाउँहरुमा त्यहाँका जनताहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था कस्तो होला ? सुनिन्छ यहाँबाट राहत स्वरुप यति प्राप्त भयो, यो व्यक्तिले यति सहयोग गर्नुभो ।
सम्पूर्ण सहयोगी मनहरुप्रति सलाम छ । यस्ता विपत्तिमा अवसर सम्झेर राहत स्वरुप आएको रकम भित्रभित्र खाने काम नहोस् । यो सहयोग बढी प्रभावित जो–जो हुनुहुन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हातमा परोस् । बडो अचम्म लाग्छ त्यस्ता तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा देख्दा, सहयोगको बहाना बनाएर छोरीको बिहेमा कन्यादान दिँदा माइती पक्षका सबैले हात छोएर दिए जसरी २/४ किलो चामल दाल १०/१५ जनाले छोएर हस्तान्तरण गरियो भन्दै पोस्टयाएको देख्दा । तर राहत ग्रहण गर्ने व्यक्तिको अनुहारमा प्रष्ट बादल लागेको देखिन्छ । राहत भन्या त दुःखेको घाउमा मलम बन्नु पर्ने होइन र ? तर यहाँ त घाउलाई उल्टो नुनचुक दलेर झन बल्झाए जस्तो लाग्यो ।
यो अवस्थामा हामी एक अर्काको सारथी बनेर हिंड्न सिक्नुपर्छ, अनि मात्र समस्याहरुलाई निर्मुल पार्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थालाई पनि अवसर सम्झेर खेल खेल्न थालियो भने त्यो महापाप हुनेछ । त्यसैले यो विपक्तीको घडीमा हामीभित्रको मानवतालाई बाहिर ल्याएर परिस्थिति सहज बनाउने प्रयास गरौं । छिटोभन्दा छिटो कोरोनाको अन्त्य भई हामी ढुक्कले बाँच्न र स्वतन्त्र बनेर हिंड्न पाउँ भन्दै भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु ।
(लेखक मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक पाल्पा संवाददाता समेत हुन् ।)